Maalinta: Sebtember 11, 2018
Cirbadaha 1915 iyo marawaxadaha dabaysha ee socodka qumman iyo wareegga, mitirrada 20 halkii ilbiriqsi (72 kiilo saacaddiiba), mitirrada 45,4 halkii ilbiriqsi (162 kiiloomitir saacadiiba) iyo mitirrada 82 saacadiiba (324 kiilo saacaddii) [More ...]
Ka shaqeeya Narlıdere Köprül Junction
Howlaha Narlıdere Viaduct iyo Köprölü Intersection, oo loogu talagalay dowladda hoose ee magaalada si ay u siiso gaadiid aan kala go 'lahayn oo u dhexeeya labada dhinac ee Karaköprü, oo u kala goosha wadada Diyarbakır, ayaa si xawli ah ku socda. Gaadiidka badan ee Şanlıurfa [More ...]
Kooxaha Booliska ee Degmada Diyarbakir oo Xoojiyay Hantidhowrka Gaadiidka Dadweynaha
Kooxaha Bilayska Magaalada Caasimadda ah ee Diyarbakir Boliiska, adeegyada gaadiidka dadweynaha ee magaalada ee gawaarida dadweynaha lagu nadiifiyo, wasaqowga kuraasta, iyo qawaaniinta ay tahay in darawalku u hoggaansamo sharciyada iyo kontaroolada. Cimilada cimilada [More ...]
Antalya waxay ka dhigtaa kala duwanaanta gaadiidka dadweynaha
Sida dhammaan aagagga kale, degmada Antalya ee Magaalo-weynaha waxay tusaale u tahay gaadiidka dadweynaha. Dawladda Hoose ee Magaalada, oo siisa gaadiid tayo leh, raaxo leh oo aamin ah kuna safraya 350 kun oo rakaab maalintiiba xagaaga, [More ...]
Iskudhufka Shade oo La Cusboonaysiiyay
Dowlada Hoose ee Gaziantep ayaa ka laabatay jasiiradda dib udajinta iyadoo ay ugu wacan tahay korodhka tirada gawaarida ee isgoyska hooska, iyada oo lafiirinayo mashruuca isgoyska gacanta 4 ee sumadda leh, isgoyska hooska ayaa dib loo eegay loona furay taraafikada qaabkeeda cusub. Dawlada Hoose ee Magaalada [More ...]
Waddada cusub ee loo yaqaan "Ring Road"
Shirka Golaha Sakarya ee Magaalada Sebtember waxaa la qabtay. Xubnaha golaha ayaa go’aamiyay 79 ajandaha ajendaha. Qorshayaasha soonaha wareega ayaa loo diyaariyay mashruuca wadada 'Serdivan Ring Road', kaas oo sameyn doona wado kale oo loogu talagay gaadiidka waqooyiga-koonfur ee magaalada [More ...]
Duqa magaalada Toçoğlu, oo dib u eegay shaqooyinka socda ee Sunflower Baaskiil Valley, ayaa yidhi, "Waxaan tababar siin doonnaa mashruucayaga hanashada horyaal ee la qaban doono dhamaadka Sebtember. Diyaargarawgu wuxuu ku socdaa xawaare buuxa. Waxaan ku qaban doonaa horyaalka dalka baadiyaha. Waxaan rajeyneynaa Sakarya, [More ...]
Duqa magaalada Celik ayaa booqday guud ahaan Hulusi Akar Boulevard
Duqa Magaalada Kayseri Mustafa Celik, Kayseri, oo keeni doona xasillooni weyn taraafikada gudaha General Hulusi Akar Boulevard ayaa laga helay. Duqa magaalada Celik, Hulusi Akar Boulevard oo leh farsamooyin cusub oo lagu soo saaro soonka [More ...]
Golaha Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri, ayaa isu yimid si ay go'aan uga gaadhaan arrimaha ajendaha. Kulankaas, go’aan muhiim ah ayaa laga qaatay gaadiidleyda dadweynaha ee degmooyinka. Go'aanka ay qaateen muwaadiiniinta iskaashatada degmada si kor loogu qaado codsiga kor u qaadida iyada oo aan laga tarjumaynin [More ...]
Tallaabooyinka taraafikada ee ka soo jeeda Kocaeli
17 ee Kocaeli Isniinta, kumanaan arday ah ayaa bilaabaya muddada waxbarashada 2018 - 2019. Gawaarida iskuulka ee ku teedsan halbowlaha weyn, gaar ahaan aroortii iyo fiidkii, oo gaadiidleyda adeega ay wataan ardayda. [More ...]
BTS Madaxweynaha Bektaş: Jarmalka ma xalin karaan dhibaatooyinka TCDD
Saxaafadda Jarmalka, meel qaaday taageero dhaqaale iyo farsamada eedeymaha Germany ayaa la casriyeeyey doonaa nidaamka tareenka ee Turkey. Sida uu sheegayo Hasan Bektas, Madaxweynaha Isutagga Gaadiidka ee United, heshiiskan wuxuu dardargelin doonaa gaar-ahaanta shirkadaha tareenka. Bektaş wuxuu yiri: [More ...]
Magaca Garoonka Diyaaradaha ee Istanbul
Kuxigeenka CHP Mersin Alpay Antmen, 3'inci Airport ee Istanbul 'Ataturk' oo ku saabsan eedeymaha ah in magaca Madaxweyne kuxigeenka Fuat Oktay'a uu siiyay mooshin si wax looga weydiiyo. Antmen, mooshinkiisa, “'garoonka diyaaradaha waxaa loogu yeeri doonaa Abdulhamit Khan' sheegashadaadu waa sax [More ...]
Ciidanku waa inuu dedejiyaa
Gegada dayuuradaha ee Ordu-Giresun International (OGU), oo xallisay dhibaato weyn xagga gaadiidka ee Ordu, waxaa laga codsaday inay ka booddo xilligii tareenka xawaaraha sare ku socday. 'Ciidanka 1. La'aan dariiqyada tareenka xawaaraha ku socda ee garoonku uu ku yaallo Aqoon isweydaarsiga Horumarinta [More ...]